माथिल्लो तामाकोशीको आइपीओमा ६ अर्ब भन्दा बढिको आवेदन ! बाँडफाँडमा ढिलाई हुने::Hamrodamak.com
माथिल्लो तामाकोशीको आइपीओमा ६ अर्ब भन्दा बढिको आवेदन ! बाँडफाँडमा ढिलाई हुने
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावरको आइपीओमा आज अन्तिम दिन करिब ६ अर्व रुपैयाँको आवेदन परेको छ ।
बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर बाँडफाँट शाखा प्रमुख रोशन जंग कार्कीका अनुसार झन्डै ३ लाख जनाले शेयरमा आवेदन दिएका छन। बैंकहरुका लागि बेलुकी १२ बजेसम्म समय दिईएकोले आवेदकको संख्या झन्डै ४ लाखको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
आइपीओको बिक्रि मूल्य प्रत्ति कित्ता १०० र न्युनतम ५० देखि अधिकतम १००० कित्ता सम्मको सेयरको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । बिहीबारबाट खुलेको आइपीओ १९ गते (सोमबार ) कार्यालय समयसम्म र अनलाईनमा ५ बजेसम्म भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बिक्री प्रबन्धकको काम नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटलले गरेका छन् ।
आइपीओको बाँडफाँड मा भने केहि समय लाग्ने कार्कीले जानकारी दिनुभयॊ। यसअघि भरेका स्थानीयले दोहोर्याएर सेयर भर्न नपाउने तथा विना डिम्याट खाता समेत आवेदन दिईएकाले चेकजाँच लगायतका कारणले केहि समय लाग्ने भएको हो।